Home Somali News Ciidamada Pakistaan oo wada hawlgalo amniga lagu sugayo!
Militariga Pakistaan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hogaamiyihii Talibanka ee ka danbeeyey weerarkii December lagu qaaday iskuul ay maamulaan militariga Pakistan.
Taj Maxamed oo loo yaqaan Riswan ayey sheegeen ciidamada inay gacanta ku dhigeen, isla markaana uu ahaa hogaamiyihii bixiyey amarka weerarkii Talibanka ku qaadeen iskuulka ku yaal magaalada Peshawar oo ay Militariga maamulaan.
Weerarkaasi dhacay 16kii bishii December ee sanadkii hore (2014) ayaa waxaa lagu dilay 145 qof oo ay ku jiraan 132 arday ah.
Dhinaca kale dowlada Pakistaan ayaa todobaadkan amar kusoo rogtay shirkadaha isgaarsiinta oo lagu amray inay diiwaangeliyaan dhamaan dadka isticmaalaha telefonada mobileka ee lacagta lagu shubto, tilaabadan oo qeyb ka ah hawlgalka balaaran oo lagu sugayo amniga wadankaasi.